कपिल शर्मा शो बन्द हुँदै – अफवाह कि वास्तविकता ? यस्तो भन्छन् कपिल आफैं ! « गोर्खा आवाज
कपिल शर्मा शो बन्द हुँदै – अफवाह कि वास्तविकता ? यस्तो भन्छन् कपिल आफैं !
एजेन्सी । भारतीय हास्य कलाकार कपिल शर्मा र उनकी श्रीमती गिन्नी चतरथ चाँडै नै दोस्रो सन्तानलाई स्वागत गर्ने तयारीमा छन् । यो कुराको खुलासा कपिल शर्मा आफैंले दिएका हुन् । ट्वीटरमा गरिएको प्रश्नोत्तर सेसनमा उनले सो कुरा बताएकाह हुन् । यसबाहेक कपिल आफैंले कपिल शर्मा शो बन्द हुन लागेको पुष्टि गरेका छन् ।
दोस्रो पटक पिता बन्दैछन् कपिल शर्माः
ट्वीटरमा थुप्रै प्रशंसकले #AskKapil का बेला हास्यकलाकारलाई विभिन्न प्रश्न सोधे र कपिलले यसको जवाफ पनि दिए । एक प्रशंसकले सोधे, ‘कपिल शर्मा सर, शो अफ एयर किन हुँदैछ ?’ यसको जवाफमा कपिल शर्माले भने, ‘किनभने म दोस्रो सन्तानको आगमनका बेला आफ्नी श्रीमतीसँग हुनुपर्नेछ ।’
त्यसपछि अर्का एक प्रशंसकले कपिललाई छोरा चाहन्छन् कि छोरी भनेर प्रश्न सोधे । प्रशंसकले सोधे, ‘तपाईं अनायराका लागि के चाहनुहुन्छ, भाइ कि बहिनी ?’ यसमा कपिलले लेखे, ‘छोरा हुन् कि छोरी, तन्दरुस्त भए पुग्छ ।’
केही दिन अघि कपिल शर्माको कमेडी शो बन्द हुन लागेको खबर आएको थियो । यद्यपि, च्यानलको तर्फबाट यसबारे कुनै पुष्टि गरिएको थिएन । कपिल शर्माको शो चाँडै नै बन्द हुने र केही समय पछि यो नयाँ सिजनका साथ आउने जानकारीमा उल्लेख छ ।
स्मरण रहोस्, कोरोनाका कारण लागू भएको लकडाउनपछि जुलाई २०२० मा द कपिल शर्मा शो केही भिन्नतासहित फिर्ता भएको थियो ।